डिजेल र मट्टितेलको मूल्य घट्यो, प्रतिलिटर कति तोकियाे ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more डिजेल र मट्टितेलको मूल्य घट्यो, प्रतिलिटर कति तोकियाे ?
डिजेल र मट्टितेलको मूल्य घट्यो, प्रतिलिटर कति तोकियाे ?
भदौ ३१ गते, २०७७ - २१:४१
काठमाडौं । डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर एकरएक रुपैयाँ घटेको छ । बुधबार राति १२ बजेबाट लागू हुने गरी मूल्य घटाइएको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिए । उनका अनुसार पेट्रोलको मूल्य भने यथावत राखिएको छ ।
इण्डियन आयल कर्पोरेशनबाट आएको नयाँ मूल्य सूचीअनुसार समायोजन गरिएको निगमले जनाएको छ । नयाँ मूल्य सूचीअनुसार डिजेल र मट्टितेलको बिक्री मूल्य निगमको डिपो क्षेत्रको १५ किलोमिटर परिसरभित्र प्रतिलिटर ९० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
हवाई ईन्धन तथा एलपी ग्यासको मूल्य भने यथावत राखेको छ । यसअघि भदौ १६ मा निगमले पेट्रोल दुई रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गरिएको थियो ।
भदौ ३१ गते, २०७७ - २१:४१ मा प्रकाशित